पर्वत जिल्ला अस्पतालमा ओपिडि सेवा नियमित सुचारु - News site from Nepal
पर्वत जिल्ला अस्पतालमा ओपिडि सेवा नियमित सुचारु
पर्वत – कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको पर्वत जिल्ला अस्पतालको बहिरंग विभाग (ओपिडि) सेवा नियमित रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला अस्पतालले कोरोना संक्रमणको महामारी जोखिमका कारण अस्पतालको नियमित विरामी जाँचको बहिरंग विभाग बन्द थियो । अस्पतालले इमरजेन्सी सेवा भने प्रवाह गर्दै आइरहेको थियो ।
पर्वत जिल्ला अस्पतालका निमिक्त सुपरीटेण्डन डा. शिशिर देवकोटाका अनुसार अहिले दैनिक ओपिडि सेवा सुचारु छ । देवकोटाका अनुसार दैनिक १ सय ५० सम्म विरामी उपचारका लागि अस्पतालमा आउने गरेका छन् । कोरोना संक्रमणसंग मिल्ने लक्षण देखिएमा विरामीको उपचार आइसोलेसन अस्पतालबाट गरिने र अन्य विरामीको उपचार जिल्ला अस्पतालबाट नै गरिदै आएको डा. देवकोटाको भनाई छ । जिल्ला अस्पतालले नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने भिडियो एक्सरे, ल्याव र विरामी जाँचको सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नभएको डा. देवकोटाको भनाई छ ।
संक्रमणको समयमा जिल्लामा समेत कोरोना संक्रमीत देखिन थालेपछि उच्च सावधानी अपनाएर अन्य विरामीहरुको उपचार शुरु गरिएको डा. देवकोटा बताउँछन् । कोरोना अस्पतालमा चिकित्सकहरुले आलोपालो गरी संक्रमीतको उपचार गरीरहेका छन् । उनीहरु १ हप्ताको उपचार पछि क्वारेन्टाइनमा बस्छन् । पिसिआर रिर्पोटका आधारमा मात्र जिल्ला अस्पतालमा फर्कन्छन् ।
जिल्ला अस्पतालमा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरुले सेवा प्रवाह गरीरहेको डा. देवकोटाको भनाई छ । अहिले जिल्लामा संक्रमणका लक्षण देखिएका बाहेक अन्य विरामीहरुको चाप उच्च रहेको डाक्टर देवकोटा बताउँछन् । पर्वत जिल्ला अस्पताल १५ शैयाको हो । अस्पतालले भने आफ्नो क्षमता भन्दा बढि प्रकारका सेवाहरु समेत प्रवाह गर्दै आइरहेको अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीको भनाई छ । अस्पतालमा अप्रेसन सेवा समेत सुचारु छ ।